Ny Teny Fototra • Momba antsika - Ireo mpamorona ny fisainana sy ny faniriana
Ny Word Foundation, Inc. dia fikambanana tsy mitady tombom-barotra miandraikitra ny fanjakana New York amin'ny volana 22, 1950. Io no hany fandaminana misy ny fananganana sy fanomezan-dalana avy amin'ny Mr. Percival ho an'ireny tanjona ireny. Ny fototra dia tsy mifandray na mifandray amin'ny fikambanana hafa, ary tsy manohana na manohana olona, ​​mpitarika, mpanolo-tsaina, mpampianatra na vondrona milaza fa nahazo tsindrimandry, voatendry na nahazo alalana hanazava sy handika ny asa soratr'i Percival.
Araka ny lalàm-panorenantsika, ny fototra dia mety manana mpikambana marobe tsy voafidy izay misafidy ny hanome azy ireo ny fanohanany ary handray soa avy amin'ny serivisy. Amin'ireny laharana ireny dia voafidy ireo mpitandrim-pananana manana talenta manokana sy sehatry ny fahaiza-manaran-kevitra, izay mifidy solontenan'ny Filankevi-pitantanana izay tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ankapobeny sy ny fanaraha-maso ny raharahan'ny orinasa. Ny mpandrindra sy ny tale dia monina any amin'ny toerana samihafa any Etazonia sy any ivelany. Miara-mivory izahay mandritra ny fivoriana fanao isan-taona sy ny fifampiresahana maharitra mandritra ny taona mba hanatanterahana ny tanjontsika iraisana-mba hamoahana ireo asa soratr'i Percival mora sy hanampy ireo mpiara-mianatra amintsika izay mifandray aminay avy amin'ny faritra maro manerana izao tontolo izao hiantsoana ny fianarany sy ny fanamby atrehin'ny olona maro amin'ny fanirian'izy ireo hahatakatra ity fiainana eto an-tany ity. Ho an'ity fikarohana momba ny Fahamarinana ity, Fisainana sy faniriana dia tsy voamarina amin'ny fomba voafaritra, ny halaliny sy ny halaliny.
Noho izany, ny fanoloran-tenantsika sy ny fitantanan-draharahantsika dia ny mampahafantatra amin'ny olona amin'izao tontolo izao ny votoatin'ny boky Fisainana sy faniriana ary koa ireo boky hafa nosoratan'i Harold W. Percival. Hatramin'ny 1950, Ny Word Foundation dia namoaka sy nanaparitaka ireo boky Percival ary nanampy ny mpamaky tamin'ny fahazoan'izy ireo ny asa soratr'i Percival. Ny fitoriana ataontsika dia manome boky ho an'ireo voafonja sy tranomboky. Manolotra boky sarobidy ihany koa isika rehefa hizara amin'ny hafa. Amin'ny alàlan'ny fandaharam-pianarantsika ho an'ny mpianatra, manampy amin'ny fanamorana ny lalan'ny mpikambana ao aminay izay te-hianatra ny asa nataon'i Percival izahay.
Ireo mpilatsaka an-tsitrapo dia manan-danja amin'ny fandaminana misy antsika satria manampy antsika hanitatra ny asa soratr'i Percival amin'ny mpamaky lehibe kokoa. Manana tombony isika fa nahazo fanampiana maro avy amin'ny namana maro nandritra ny taona maro. Ny anjara biriky nentin'izy ireo dia ny famoahana boky ho an'ny tranomboky, ny fandefasana bokintsika ho namana, fandaminana ireo vondrona fianarana tsy miankina, ary ny asa mitovy amin'izany. Mahazo fandraisana anjara ara-bola izay tena nanampy anay hanohy ny asanay koa izahay. Misaotra sy mankasitraka indrindra an'io fanampiana io izahay!
Rehefa manohy ny ezaka ataontsika izahay mba hizara ny lova navelan'ny Percival ho an'ny zanak'olombelona, ​​dia manasa amim-pitiavana ireo mpamaky vaovao izahay mba hiaraka aminay.
Ny "Hafatra" dia ny lahatsoratra voalohany nosoratan'i Harold W. Percival ho an'ny gazetim-panjakany malaza, The Teny. Namorona andian-dahatsary fohy kokoa ho an'ny pejy voalohany ho an'ny gazety izy. Ny etsy ambony isa replication of this shorter version from ny volavolam-boky voalohany amin'ny roapolo voafehy roapolo, 1904 - 1917. Azo vakiana amin'ny endriny manontolo ny lahatsoratra Pejy Editorials.